Uite Ruramisiro Uye Kururama, Famba naMwari | Swedera Pedyo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1-3. (a) Nei tiine chikwereti kuna Jehovha? (b) Mununuri wedu ane rudo anodei kwatiri?
FUNGIDZIRA uri mungarava iri kunyura mausingagoni kubuda. Paunenge wava kufunga kuti hapachina tariro, mununuri obva asvika okukweva kubuda munjodzi. Unozorodzwa sei mununuri wako sezvaanokubvisa pane ngozi obva ati: “Wapona”! Hawaizonzwa une chikwereti kumunhu iyeye here? Mupfungwa chaiyo, ndiye anenge akuponesa.
2 Mune imwe nzira, izvi zvinoenzanisira zvatakaitirwa naJehovha. Chokwadi tine chikwereti kwaari. Pamusoro pazvo, akagovera rudzikinuro, achiita kuti zvibvire kuti tinunurwe muusungwa hwechivi norufu. Tinonzwa takachengeteka, tichiziva kuti chero bedzi tichitenda muchibayiro chinokosha ichocho, zvivi zvedu zvinokanganwirwa, uye nguva yedu yemberi yakachengeteka. (1 Johani 1:7; 4:9) Sezvinoratidzwa muChitsauko 14, chibayiro chorudzikinuro kuratidzwa kukuru kworudo rwaJehovha neruramisiro. Tinofanira kuita sei?
3 Zvakakodzera kufunga izvo Mununuri wedu ane rudo anoda kwatiri. Jehovha anotaura nokumuprofita Mika kuti: “Iye, wakakuzivisa iwe munhu, kuti zvakanaka ndezvipi; chinotsvakwa naJehovha kwauri chinyiko, asi kuti uite [“ruramisiro,” NW] ude unyoro, uye ufambe uchizvininipisa pamberi paMwari wako?” (Mika 6:8) Ona kuti chimwe chezvinhu zvinodiwa naJehovha kwatiri ndechokuti ti“ite ruramisiro.” Tingaita sei kudaro?
Kutevera “Kururama Kwechokwadi”
4. Tinoziva sei kuti Jehovha anotitarisira kurarama mukuwirirana nemitemo yake yakarurama?
4 Jehovha anotitarisira kurarama mukuwirirana nemitemo yake yezvakarurama nezvisakarurama. Sezvo mitemo yake iine ruramisiro uye yakarurama, tiri kutevera ruramisiro nokururama patinowirirana nayo. “Dzidzai kuita zvakanaka; tsvakai kururamisira,” inodaro Isaya 1:17. Shoko raMwari rinotikurudzira ku“tsvaka kururama.” (Zefania 2:3) Rinotikurudzirawo “kupfeka unhu hutsva hwakasikwa maererano nokuda kwaMwari mukururama kwechokwadi.” (VaEfeso 4:24) Kururama kwechokwadi—ruramisiro yechokwadi—haina chisimba, kusachena, uye unzenza, nokuti izvi zvinosvibisa zvinhu zvitsvene.—Pisarema 11:5; VaEfeso 5:3-5.
5, 6. (a) Nei usiri mutoro unorema kwatiri kuwirirana nezvinodiwa naMwari? (b) Bhaibheri rinoratidza sei kuti kutevera kururama chinhu chinoramba chichiitwa?
5 Mutoro unorema here kwatiri kurarama mukuwirirana nemitemo yaJehovha yakarurama? Aiwa. Mwoyo unokweverwa kuna Jehovha haunetswi nezvaanoda. Nemhaka yokuti tinoda Mwari wedu nezvose zvaari, tinoda kurarama nenzira inomufadza. (1 Johani 5:3) Yeuka kuti Jehovha “anoda zvakarurama.” (Pisarema 11:7) Kana tichizotevedzera zvechokwadi ruramisiro yaMwari, kana kuti kururama, tinofanira kusvika pakuda zvinodiwa naJehovha nokuvenga zvaanovenga.—Pisarema 97:10.
6 Hazvisi nyore kuti vanhu vasina kukwana vatevere kururama. Tinofanira kubvisa unhu hwekare nomuitiro wahwo wetsika yokuita zvivi topfeka unhu hutsva. Bhaibheri rinoti unhu hutsva huri ku“itwa hutsva” nezivo yakarurama. (VaKorose 3:9, 10) Mashoko okuti “hunoitwa hutsva” anoratidza kuti kupfeka unhu hutsva chinhu chinoramba chichiitwa, chinoda kushanda nesimba. Pasinei nokuti tinoedza zvakadini kuita zvakarurama, pane nguva apo unhu hwedu hwokutadza hunotiparira kukanganisa kufunga, kutaura, kana kuti kuita.—VaRoma 7:14-20; Jakobho 3:2.
7. Tinofanira kuona sei mhinganidzo dzatinosangana nadzo mukuedza kwedu kutevera kururama?
7 Tinofanira kuona sei mhinganidzo dzatinosangana nadzo mukuedza kwedu kutevera kururama? Chokwadi, hatingadi kurerutsa kukomba kwechivi. Panguva imwe chete, hatifaniri kuneta, tichinzwa sokuti kutadza kwedu kunotiita kuti tive vasina kukodzera kushumira Jehovha. Mwari wedu ane nyasha akaita urongwa hwokudzorera vanopfidza zvechokwadi kuti vawanezve nyasha dzake. Funga nezvemashoko anokurudzira omuapostora Johani anoti: “Ndiri kukunyorerai zvinhu izvi kuti murege kuita chivi.” Asi anowedzera zviri zvechokwadi kuti: “Asi, kana munhu akaita chivi [nemhaka yokusakwana kwokuberekwa nakwo], tine mubetseri ari kuna Baba, Jesu Kristu.” (1 Johani 2:1) Hungu, Jehovha akagovera chibayiro chorudzikinuro chaJesu kuitira kuti tigone kumushumira zvinogamuchirika pasinei nechivi chedu chatakaberekwa nacho. Izvozvo hazvitiiti kuti tide kuita zvose zvatinogona kufadza Jehovha here?
Mashoko Akanaka Neruramisiro yaMwari
8, 9. Kuziviswa kwemashoko akanaka kunoratidza sei ruramisiro yaJehovha?
8 Tinogona kururamisira—chaizvo tingati, kutevera ruramisiro yaMwari—nokuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari zvizere kune vamwe. Ruramisiro yaJehovha nemashoko akanaka zvakabatana papi?
9 Jehovha haazogumisi nyika ino yakaipa asati ambotanga aita kuti nyevero ipiwe. Muuprofita hwake pamusoro pezvaizoitika munguva yomugumo, Jesu akati: “Mashoko akanaka anofanira kutanga aparidzwa kumarudzi ose.” (Mako 13:10; Mateu 24:3) Kushandiswa kweshoko rokuti “kutanga” kunoratidza kuti zvimwe zviitiko zvichatevera basa rokuparidza romunyika yose. Zviitiko izvi zvinobatanidza kutambudzika kukuru kwakafanotaurwa, uko kuchareva kuparadzwa kwevakaipa kuchazarurira nzira nyika itsva yakarurama. (Mateu 24:14, 21, 22) Chokwadi, hapana anogona kupomera Jehovha nenzira yakanaka kuti haana kururamisira vakaipa. Nokuita kuti nyevero ipiwe, ari kupa vakadaro mukana mukuru wokuti vachinje nzira dzavo uye naizvozvo vagopukunyuka kuparadzwa.—Jona 3:1-10.
Tinoratidza ruramisiro yaMwari patinopa mashoko akanaka kune vamwe tisingasaruri
10, 11. Kuita kwedu basa rokuparidza mashoko akanaka kunoratidza ruramisiro yaMwari sei?
10 Kuparidza kwedu mashoko akanaka kunoratidza sei ruramisiro yaMwari? Kutanga, zvakarurama kuti tiite zvatinogona kubatsira vamwe kuti vawane ruponeso. Funga zvekare nezvomuenzaniso wokununurwa mungarava yava kunyura. Wava pakachengeteka muchikepe chokununura, pasina mubvunzo waizoda kubatsira vamwe vachiri mumvura. Saizvozvowo tine musengwa kune avo vachiri kutambura mu“mvura” yenyika ino yakaipa. Chokwadi vazhinji vanoramba shoko redu. Asi chero bedzi Jehovha achiramba achishivirira, tine basa rokuvapa mukana wokuti “vasvike pakupfidza” nokudaro votarisira kuponeswa.—2 Petro 3:9.
11 Nokuparidza mashoko akanaka kuvanhu vose vatinosangana navo, tinoratidza ruramisiro neimwe nzira inokosha: Tinoratidza kusasarura. Yeuka kuti “Mwari haasaruri, asi murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mabasa 10:34, 35) Kana tichizotevedzera ruramisiro Yake, hatifaniri kufanotonga vanhu. Asi, tinofanira kutaurira vamwe mashoko akanaka pasinei nedzinza ravo, zvavari munzanga, kana kuti mari yavanayo. Nokudaro tinopa vose vachateerera mukana wokunzwa nokuita chimwe chinhu nemashoko akanaka.—VaRoma 10:11-13.
Mabatiro Atinoita Vamwe
12, 13. (a) Nei tisingafaniri kukurumidza kutonga vamwe? (b) Zano raJesu rokuti “musatonga” uye “musapa mhosva” rinorevei? (Onawo mashoko omuzasi.)
12 Tinogona kuratidzawo ruramisiro nokubata vamwe nenzira iyo Jehovha anotibata nayo. Zviri nyore kwazvo kungogarira kutonga vamwe, tichitsoropodza zvikanganiso zvavo nokuratidza kusava nechokwadi nevavariro dzavo. Asi ndiani wedu aizoda kuti Jehovha aongorore vavariro dzedu, uye zvikanganiso zvedu nenzira isina tsitsi? Iyoyo haisiyo nzira iyo Jehovha anotibata nayo. Munyori wepisarema akati: “Dai imi Jehovha mairangarira zvisakarurama, ndianiko wairamba amire, Ishe?” (Pisarema 130:3) Hationgi here kuti Mwari wedu weruramisiro uye ane tsitsi anosarudza kusangosimbirira pane zvatinokundikana? (Pisarema 103:8-10) Saka tinofanira kubata vamwe sei zvino?
13 Kana tichionga kuva netsitsi kweruramisiro yaMwari, hatizokurumidzi kutonga vamwe munhau dzisina chokuita nesu kana kuti dzisina basa. MuMharidzo yake yepaGomo, Jesu akanyevera kuti: “Musatonga kuti murege kutongwa.” (Mateu 7:1) Maererano nenhoroondo yaRuka, Jesu akawedzera kuti: “Musapa mhosva, uye hamuzombopiwiwo mhosva.” * (Ruka 6:37) Jesu akaratidza kuziva kwake kuti vanhu vasina kukwana vane tsika yokuda kutonga. Vateereri vake vangave vaiva netsika yokutonga vamwe nehasha vaifanira kuzvirega.
14. Tinofanira ku“satonga” vamwe nokuda kwezvikonzero zvipi?
14 Nei tichifanira ku“satonga” vamwe? Chokutanga, chiremera chedu chine pachinogumira. Mudzidzi Jakobho anotiyeuchidza kuti: “Kune mumwe anopa mitemo nomutongi”—Jehovha. Naizvozvo Jakobho anonyatsobvunza zvakananga kuti: “Asi iwe, ndiwe ani kuti utonge muvakidzani wako?” (Jakobho 4:12; VaRoma 14:1-4) Uyezve, kuva kwedu vatadzi kunogona kuita kuti kutonga kwedu kuve kusina ruramisiro. Pfungwa zhinji nevavariro—kusanganisira rusaruro, kuzvikudza, godo, nokuzviita akarurama—zvinogona kukanganisa maonero atinoita vamwe vanhu. Tine zvimwezve zvatinokundikana, uye kufungisisa nezvazvo kunofanira kutidzora pakukurumidza kuwanira vamwe mhosva. Hatigoni kuona zviri mumwoyo; uyewo hatigoni kuziva mamiriro ose ezvinhu evamwe. Saka tiri vanaaniwo zvedu kuti tifungire kuti hama dzedu dzine vavariro dzakaipa kana kuti kutsoropodza zvavanoedza kuita mubasa raMwari? Zviri nani sei kuti titevedzere Jehovha nokutsvaka zvakanaka zviri muhama nehanzvadzi dzedu pane kungobudisira ziso zvikanganiso zvavo!
15. Mashoko api nemabatiro zvisina nzvimbo pakati pevanamati vaJehovha, uye nei?
15 Zvakadini nevemumba medu? Zvinosiririsa kuti munyika yanhasi kumwe kwokutonga kune utsinye kupfuura kwose kunoitwa munzvimbo inofanira kuva ugaro hworugare—musha. Hazvishamisi kunzwa nezvevarume, madzimai, kana kuti vabereki vanogara vachishusha nhengo dzemhuri dzavo vachidzituka kana kuti kudzirova. Asi mashoko outsinye, chibhende chinorwadza, nokubata nehasha hazvina nzvimbo pakati pevanamati vaMwari. (VaEfeso 4:29, 31; 5:33; 6:4) Zano raJesu rokuti “musatonga” uye “musapa mhosva” harimiri kushanda kana tiri pamba. Yeuka kuti kuita ruramisiro kunobatanidza kubata vamwe munzira iyo Jehovha anotibata nayo. Uye Mwari wedu haamboiti hasha kana kuti utsinye mukubata nesu. Asi “ane rudo rukuru kwazvo” kune avo vanomuda. (Jakobho 5:11) Muenzaniso wakazonaka wokuti titevedzere!
Vakuru Vanoshumira Va“chiruramisira”
16, 17. (a) Jehovha anotarisira chii kuvakuru? (b) Chii chinofanira kuitwa apo mutadzi anokundikana kuratidza rupfidzo rwechokwadi, uye nei?
16 Tose tine basa rokururamisira, asi kunyanya vakuru vari muungano yechiKristu vane basa guru panhau iyi. Cherechedza kurondedzerwa kwouprofita kwe“machinda,” kana kuti vakuru kwakanyorwa naIsaya kunoti: “Tarirai, mambo uchabata ushe nokururama, machinda achabata achiruramisira.” (Isaya 32:1) Hungu, Jehovha anotarisira vakuru kuti vashumire sezvinodiwa neruramisiro. Izvi vangazviita sei?
17 Varume vane zvinodiwa zvomudzimu ava vanonyatsoziva kuti ruramisiro, kana kuti kururama, zvinoda kuti ungano ichengetwe yakachena. Pane dzimwe nguva, vakuru vanofanira kutonga nhau dzokutadza kwakakomba. Pavanoita kudaro, vanoyeuka kuti ruramisiro yaMwari inotsvaka kuratidza ngoni kana zvichibvira. Naizvozvo vanoedza kuita kuti mutadzi apfidze. Asi zvakadini kana mutadzi akakundikana kuratidza kupfidza kwechokwadi pasinei nokuedza kumubatsira kwakadaro? Mururamisiro yakakwana, Shoko raJehovha rinorayira kuti danho rakasimba riitwe: “Bvisai munhu akaipa pakati penyu.” Izvozvo zvinoreva kumudzinga muungano. (1 VaKorinde 5:11-13; 2 Johani 9-11) Zvinorwadza vakuru kuti vasvike pakutora danho rakadaro, asi vanoziva kuti zvinokosha kuitira kudzivirira rucheno rwetsika norwokunamata rweungano. Kunyange ipapo, vanotarisira kuti rimwe zuva mutadzi achafunga zvakanaka odzoka kuungano.—Ruka 15:17, 18.
18. Vakuru vanoramba vachiyeukei pakupa vamwe zano rinobva muBhaibheri?
18 Kushumira nokururamisira kunobatanidzawo kupa zano rinobva muBhaibheri kana richidiwa. Chokwadi, vakuru havatsvaki zvikanganiso zvevamwe. Uyewo havangogari vachiita basa rokururamisa. Asi mumwe mutendi anga“darika asati azviziva.” Kuyeuka kuti ruramisiro yaMwari haina utsinye uye kuti inoratidza tsitsi kuchaita kuti vakuru ‘vaedze kururamisa munhu akadaro nounyoro.’ (VaGaratiya 6:1) Nokudaro, vakuru havazotuki mutadzi kana kuti kushandisa mashoko ehasha. Asi, zano rinopiwa norudo rinokurudzira uyo anorigamuchira. Kunyange pakupa tsiuro yakananga—vachitsanangura zvakajeka migumisiro yenzira isiri yokuchenjera—vakuru vanoyeuka kuti hama yakatadza igwai riri muboka raJehovha. * (Ruka 15:7) Pazvinenge zviri pachena kuti zano kana kuti tsiuro zviri kupiwa norudo, zvingangobatsira kugadziridza mutadzi.
19. Zvisarudzo zvei izvo vakuru vanodiwa kuti vaite, uye vanofanira kuita zvisarudzo zvakadaro zvichibva pai?
19 Vakuru kazhinji vanodiwa kuti vaite zvisarudzo zvine chokuita nehama dzavo. Somuenzaniso, vakuru vanosangana nguva nenguva kuti vaone kana dzimwe hama dziri muungano dzichikwanisa kurumbidzwa sevakuru kana kuti vashumiri vanoshumira. Vakuru vanoziva kukosha kwokusasarura. Vanoita kuti zvinodiwa naJehovha pakugadza kwakadaro zvivatungamirire pakuita zvisarudzo, kwete kungovimba nemanzwire avo pachavo. Nokudaro vanoita “pasina kufanotonga, [vasingaiti] chinhu norusaruro.”—1 Timoti 5:21.
20, 21. (a) Vakuru vanoedza kuva chii, uye nei? (b) Chii icho vakuru vangaita kubatsira “mweya yakaora mwoyo”?
20 Vakuru vanoita ruramisiro yaMwari mune dzimwe nzira zvakare. Afanotaura kuti vakuru vaizoshumira “vachiruramisira,” Isaya akaendera mberi achiti: “Munhu mumwe nomumwe uchava soutiziro pamhepo, sechivando pakunaya kukuru kwemvura, senzizi dzemvura panzvimbo yakaoma, somumvuri wedombo guru panyika yafa nenyota.” (Isaya 32:2) Naizvozvo vakuru vanoedza kuva nyaradzo nezorodzo kuhama dzavo.
21 Nhasi, nezvinetso zvose zvinoodza mwoyo, vazhinji vanoda kukurudzirwa. Vakuru chii chamungaita kubatsira “mweya yakaora mwoyo”? (1 VaTesaronika 5:14) Vateererei muchinzwira tsitsi. (Jakobho 1:19) Pamwe vangada kutaurira mumwe munhu wavanovimba naye “kutambudzika” kuri mumwoyo mavo. (Zvirevo 12:25) Vavimbisei kuti vanodikanwa, vanokosheswa, uye vanodiwa—hungu, naJehovha uye nehama nehanzvadzi dzavo. (1 Petro 1:22; 5:6, 7) Mukuwedzera, munogona kunyengetera navo nokuvanyengeterera. Kunzwa mukuru achivanyengeterera nomwoyo wose kunogona kunyaradza zvikuru. (Jakobho 5:14, 15) Kuedza kwenyu kworudo kubatsira mweya yakaora mwoyo kunoonekwa naMwari weruramisiro.
Vakuru vanoratidza ruramisiro yaJehovha pavanokurudzira vakaora mwoyo
22. Munzirai umo tingatevedzera ruramisiro yaJehovha, uye nomugumisiro wei?
22 Chokwadi, tinoramba tichiswedera pedyo naJehovha nokutevedzera ruramisiro yake! Patinosimudzira mitemo yake yakarurama, patinopa vamwe mashoko akanaka anoponesa upenyu, uye patinosarudza kutarisa zvakanaka zvinoitwa nevamwe pane kutarisa zvikanganiso zvavo, tiri kuratidza ruramisiro yaMwari. Vakuru, pamunochengeta rucheno rweungano, pamunopa zano reMagwaro rinovaka, pamunoita zvisarudzo zvisina rusaruro, uye pamunokurudzira vakaora mwoyo, muri kuratidza ruramisiro yaMwari. Zvinofanira kufadza mwoyo waJehovha kutarisa ari kudenga achiona vanhu vake vachiedza nepose pavanogona napo kuti va“ite ruramisiro” mukufamba naMwari wavo!
^ ndima 13 Dzimwe shanduro dzinoti “musatonga” uye “musapa mhosva.” Kushandura kwakadaro kune pfungwa yokuti “musatanga kutonga” uye “musatanga kupa mhosva.” Zvisinei, vanyori veBhaibheri pano vanoshandisa mutauro wokurayira uchidzivisa zviri kutoitika. Naizvozvo zviito zviri kurondedzerwa zvakanga zvichitoitika asi zvaifanira kumira.
^ ndima 18 Pana 2 Timoti 4:2, Bhaibheri rinoti vakuru pane dzimwe nguva vanofanira ‘kutsiura, kuranga, kurayira.’ Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “rayira” (pa·ra·ka·le′o) rinogona kureva “kukurudzira.” Shoko rechiGiriki rakada kufanana naro, pa·ra′kle·tos, rinogona kureva kutsigira munhau yepamutemo. Nokudaro, kunyange apo vakuru vanopa tsiuro yakasimba, vanofanira kuva vabatsiri vevaya vanoda kubatsirwa mumudzimu.
Dheuteronomio 1:16, 17 Jehovha aidei kuvatongi muna Israeri, uye vakuru vangadzidzei pazviri?
Jeremia 22:13-17 Jehovha anonyevera pamusoro pemiitiro ipi isiri yokururamisira, uye chii chinokosha mukutevedzera ruramisiro yake?
Mateu 7:2-5 Nei tisingafaniri kukurumidza kutsvaka zvikanganiso zviri muhama dzedu?
Jakobho 2:1-9 Jehovha anoona sei kuratidzwa kwokusarura, uye tingashandisa sei zano iri mukubata kwedu nevamwe?
Vakuru vanobatsira sei hama nehanzvadzi kuti dzifare mubasa raMwari?